Maitiro ekuona chakavanzika iOS 12 Weather widget | IPhone nhau
iOS 12 inosanganisira dzakawanda dzinonakidza nhau kuti Apple yaive nebasa rekutiratidza mune yayo hurukuro panguva yeWWDC 2018 muna Chikumi apfuura, asi Izvo zvinosanganisirawo zvimwe zvakavanzika 'Easter mazai', imwe yacho iri YeMamiriro ekunze app widget inoratidzwa chete pasi pemamwe mamiriro ezvinhu.
Kunyangwe iri nyore kuvhurika iwe unofanirwa kutevedzera zvakapusa zvinodiwa kuitira kuti mangwanani ega ega iPhone yako inokupa iwe mangwanani akanaka nemamiriro ekunze pane yako yekuvhara skrini. Tinokuratidza nhanho nhanho kuti ungazviwana sei.
Iyi iwijeti inongowanikwa kana nguva ye "Usakanganisa" yapedza ne "Kurara mamiriro" anoshanda. Kana izvi zvinodikanwa zvikaitika, iyo iPhone inokukwazisa iwe ne "Mangwanani akanaka" ichiperekedzwa nemamiriro ekunze ezuva iro uye mamiriro ekunze aripo. Tichifunga nezve kupesana kweApple kwagara kuri kuwedzera mawadhiji kukiya yayo yekukiya, Zvinoshamisika kuti basa iri riripo uye kunyangwe zvakanyanya zvekuti ivo vakahwanda kwazvo kubva kumushandisi. Haisi iyo sarudzo yaunofanirwa kumisikidza, asi pane akateedzana masisitimu aunofanirwa kuita kuitira kuti, chete kana ukasangana nezvose zvinodiwa, zvinoonekwa kana uchimuka.
Chekutanga chinodiwa ndechekuti mamiriro ekunze anokwanisa kuwana nzvimbo nguva dzese. Kuti uone kuti izvi ndizvo zvazviri, unofanirwa kuwana menyu «Yakavanzika> Nzvimbo> Nguva» uye ita shuwa kuti sarudzo «Nguva dzose» Chero chii chinomakwa. Kana izvi zvaitwa isu tinogona kuenda kunhanho inotevera.
Isu tinofanirwa kumisikidza iyo "Usakanganisa" maitiro kuti ishande, kuitisa iyo panguva yehusiku uye kumisikidza iyo "Kurara Mamiriro". Nesarudzo idzi dzinoshanda, kubva panguva yatakarongedza hatizonetseke nezviziviso, uye hatizovaone pane yekukiya skrini kunyangwe yakavhurwa. Panzvimbo iyoyo isu tichaona mureza unoratidza kuti Usakanganisa mamiriro ari kushanda. Just kana iyo Yekuti Usakanganise mamiriro yapera, iyo yemamiriro ekunze widget inozoonekwa kutaura mangwanani uye nekufanotaura kwanhasi. Unogona kutora bvunzo chero nguva nekumisikidza Yekusavhiringidza modhi kuti upedze muminiti, uye iwe uchaona iyo widget chaipo kana yaitwa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iOS » iOS 12 » Maitiro ekuona yakavanzwa iOS 12 Weather widget
Mangwanani akanaka, ine iOS 13, zvinoita sekunge sarudzo iyi haigone kumisikidzwa, nekuti sarudzo yekuvanzika> nzvimbo> nguva> »nguva dzose« yanyangarika.
Ini zvirinani handikwanise kuwana nzira yekuisa.
Zvisinei nekuyedza kwaApple, vashandisi vanoshinga vanoramba vachiita mutsara kuti vatenge maPhones matsva